यो उमेरमा पनि समानताको कुरा गर्दा मलाई लाज लागिसक्यो – Nepal Fashion Week
January 11, 2018 NEPALFASHIONWEEKEntertainmentNo Comment on यो उमेरमा पनि समानताको कुरा गर्दा मलाई लाज लागिसक्यो
‘आइडियल्ली’ त म फिल्म बनाइरहेको समयमा त्यस्ता कुराहरूबाट टाढा हुनैपर्छ भन्ने मान्छु। तर कहिलेकाहीँ सम्भव हुँदैन। मेरा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जरुरी के हो भने जतिबेला म पात्रमा छिरिरहेको हुन्छ र पात्रको बारेमा खोजी गरिरहेको हुन्छु त्यसबेला धेरै एकाग्रता चाहिन्छ। त्यस बेला जेसुकै भए पनि ध्यान कतै मोड्नु हुँदैन। कुनैबेला यसले लामो समय पनि लिन सक्छ। ‘तनु वेड्स मनु’ को दत्तु क्यारेक्टर बुझ्न मलाई १० दिन लागेको थियो। ‘मनी कर्निका’ गर्दा सबैभन्दा लामो समय लागेको थियो। कुनै बेला दुई दिनमै पनि हुन्छ।
नवाजुद्धिन सिद्दिकीसँग उनी कसरी चरित्र बनाउँछन् भन्ने बारेमा कुरा गर्दा भनेका थिए कि उनी आफ्नो पात्रहरूलाई दिने स्वरूप वास्तविक जीवनबाटै टिप्छन्। ‘ग्याङ्स् अफ वासेपुर’मा भएका दृश्यहरु उनको वास्तविक जीवनकै घटनाबाट बनेका थिए। तपाईं पनि आफ्नो पात्रलाई धेरै ध्यान दिएर बनाउनुहुन्छ। सिमरन, रानी वा दत्तोमा देखिएका केही कुराहरू वास्वविक कंगनाहरूबाट आएका छन्?
एक कलाकारको रूपमा मेरो व्यक्तित्व मैले गर्ने पात्रहरूमा कुनै न कुनै रूपमा आँउछ नै। मैले बलियो रूपमा विश्वास गर्ने सोचाइहरू आएका हुन सक्छन्। सिमरनको क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्दा ऊ धनी हुन चाहने एक केटी हो। तर मैले ‘सेक्स गर्न चाहने एक केटी’ बनाइदिएँ। हामीले एक देशको रूपमा पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि महिलाहरू पनि सेक्स गर्न चाहन्छन्। मेरै समाजमा मैले भोगेको अनुभवको आधारमा पनि मैले त्यो सोचेँ। एक महिला भएर सेक्स गर्न चाहनु बिल्कुलै सामान्य र स्वस्थ कुरा हो। सिमरनको छोडपत्र भएको छ, ऊ धेरै केटा छान्छे। रमाइलो गर्छे। उसलाई त्यसमा गर्व छ र त्यसो गर्नुमा कुनै गलत छैन।
तपाईंको पछिल्लो फिल्म ‘सिमरन’को बारेमा कुरा गरौँ- तपाईंले एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो- पहिलोपल्ट जब हेन्सल तपाई‍ंलाई भेट्न आए तपाईंले निर्देशक कलाकारको सम्बन्ध हैन कि ‘पार्टनरसिप’ चाहियो भन्नुभयो। हिन्दी फिल्मका चर्चित र सफल कलाकारहरू जस्तै आमिर खान वा शाहरूख खानले पनि निर्देशकको भिजनसँग आफूलाई समर्पण गर्ने भनेका छन्। तपाईंले त्यो सबैबाट अघाइसकेँ भन्नुभयो। किन?
म ‘इगो’ले भरिएका निर्देशकहरूबाट निर्देशन लिनबाट अघाइसकेँ। म कसैको सुपरभिजनमा काम गर्न मन पराउँछु तर उनीहरूसँग समानताको सोच हुनपर्छ। निर्देशकहरू धेरैजसो आफूलाई तानाशाह सम्झन्छन्। एक निर्देशक सम्झिन्छु। उनी भन्थे, तिमी यो लाइनमा तल हेर्ने र यो लाइनमा माथि हेर्ने। यो लाइनमा बाहिर निस्किनु। निर्देशकले मलाई कसरी अभिनय गर्ने भनेर सिकाउने हैन। म कलाकार हुँ, त्यसैले मैले गर्ने हो। उनको काम सन्दर्भ बुझाएर मलाई दृश्य यस्तो हो भनेर बताउने हो। त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने त मेरो काम हो। मैले काम गरेकामध्ये सबैभन्दा राम्रो निर्देशक र उनीहरूले दिने निर्देशन भनेको उनीहरू मेरो अभिनयको स्तर तल वा माथि गर्न लगाउँथे। त्यो सबैभन्दा राम्रो निर्देशन हो। निर्देशन भनेको कलाकारलाई जे भनेको त्यही गर्न लगाउनु हैन। मैले काम गरेको अर्का निर्देशक भन्थे, तिमीलाई आफ्नो पात्रको बारेमा जे भन्न मन छ त्यो भ्यानमै भन। अरूको सामुन्ने नभन। यो राम्रो देखिँदैन किनकि क्रुले मलाई इज्जत गर्छन्। मैले निर्देशकलाई आफ्नो पात्रको बारेमा जे फिल गरेको छु त्यो भन्न पाउँदिन। किनकि उनीहरूको मेल इगो हर्ट हुन्छ।
‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ मा दोहोरो भूमिका गर्नुभएको छ। तिनीहरू आपसमा धेरै विपरित छन्। त्यो भूमिका निभाउँदा वा आफूविरुद्ध आफैं अभिनय गर्दाको अनुभव बताउनुहोस् न।
यो मेरो ‘टेक्निक’ हैन। कसैको हो तर जब मैले सुनेँ, मलाई यो नै सही लाग्यो। म त्यही गर्छु। दुईवटा पात्रमा काम गर्दा भने कहिलेकाहीँ पात्रको बानी मिसिने सम्भावना भने हुन्छ। कलाकारसँग अभिनयको कुनै शो रूम वा वर्कसप हुँदैन। आफ्नो शरीर र इमोसनको बलमा त्यो सबै काम गर्नुपर्छ। म फेरि दुई टेकभन्दा धेरै लिन सक्दिन। एक पटक पात्रमा छिरेपछि दुई टेकभन्दा धेरै भयो भने आधा घण्टा ब्रेक लिन्थेँ। निर्देशकले पनि त्यो कुरा बुझ्नुभयो। बुझ्नुपर्छ।
दृश्य सकेर घर फर्किँदै गर्दा आफूलाई कुनै पात्रबाट ‘स्विच अफ’ कसरी गर्नुहुन्छ? नयाँ दिनका लागि कसरी तयारी गर्नुहुन्छ?
यो साँच्चै दु:ख लाग्दो समय हो। अरू कुनै असफलता जस्तै असफलता। त्यस्तो अवस्था आउँदा ब्राण्डमा असर पर्छ। आर्थिक कुराहरू फरक पर्छन्। यस्तो बेला दार्शनिक कुरा गरिएला तर त्यसो गर्नु पनि उपयुक्त हैन। बरु त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। असफलता सबैतिर हुन्छ। त्यसले बाहिर फाल्दिन्छ, हामी उठेर बाँच्नुपर्छ। म यसलाई ‘रोमान्टिसाइज’ गर्न रुचाउँदिन। तर यो धेरै गाह्रो हुन्छ।
मजस्तै धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ, जसले यो सबै गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि भुल्नु हुँदैन। कोही त असाधारण पनि हुनुहुन्छ। मैले क्रेडिट आफूबाट टाढा जाओस् भनेकी हैन, किनकि मैले गरेका कामहरू पनि फरक छन्। तर म नभएको भए पनि अरू कोहीमार्फत यो परिवर्तन आएरै छोड्थ्यो। म त्यो परिवर्तनमा ‘पायनियर’ हुँ भन्दिन तर ‘क्याटलिस्ट’ भने हुँ। म त्यसमा खुसी छु।
डराएको छु। तर अहिले धेरै डर लाग्दैन। किनकि एक रूपमा मैले धेरै कुरा प्राप्त गरिसकेको छु। मनालीमा सुन्दर घर छ। म आफैंलाई भन्छु, कि यदि केही चिजले पनि काम गरेन भने म घर फर्किन्छु। त्यस्तो ‘लाइन’ सबैले बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई मेरो जीवन मन लागेको तरिकाले बाँच्ने अधिकार छ। मानिसहरू मलाई झुटो, पागल, वेश्या प्रमाणित गर्न पनि लागे। हुनसक्छ, पछि पनि लाग्लान्। तर मैले के सिकेको छु भने जित्ने प्रयत्न गर्ने हो। जित्छु ठिक छ, तर यदि जित्दिन भने मनाली फर्किनेछु। किताब लेख्नेछु। त्यो जीवन पनि नराम्रो छैन।
म आफैंलाई भनिरहन्छु- इरफान, यो झुठो पहिचानलाई विश्वास नगर!